Ruushka oo beeniyay in ciidammadiisa uu kala baxay deegaanka Afrin ee Suuriya | Raadgoob
Ruushka oo beeniyay in ciidammadiisa uu kala baxay deegaanka Afrin ee Suuriya
Dowladda Ruushka ayaa beenisay warar ay baahisay warbaahinta dowladda Turkiga oo sheegayay in Ruushka uu kala baxay ciidamaddiisa deegaanka Afrin oo ku yaalla waqooyiga waddanka Suuriya oo ay gacanta ku hayeen dagaalyahanada Kurdishka.
Waxaa la rumeysan yahay in ka bixitaanka ciidammada Ruushka ee Afrin ay waddada u xaari karto in milatariga Turkigu ay weeraraan dagaalyahannada Kuridyiinta ee ku sugan gudaha Suuriya.
Golaha amaanka oo ansixiyay heshiiska Suuriya
Milatariga Turkiga oo sheegay in dagaalyahannada Kurdishka ay isbaheysi la leeyihiin maleeshiyaadka Kurdiyiinta ee ka dagaalama gudaha Turkiga, ayaa maalmihii lasoo dhaafay geeyay ciidammadooda xadka Suuriya.
Balse wasiirka arrimaha dibadda ee Ruushka Sergei Lavrov, ayaa sheegay in wararka sheegaya in ciidammada Ruushku ay ka baxeeyn deegaanka Afrin ay tahay been abuur.
Madaxweynaha Turkiga Rajeb Tayib Erdogan ayaa horey ugu gacan seeray qorshe cusub oo uu Maraykanka ku doonayay in xudduuda Suuriya iyo Turkiga ku geeyo ciidammo gaaraya 30 kun oo ka tirsan Kurdiyiinta, si ay amniga u sugaan.
Madaxweyne Erdogan ayaa qorshahan ku tilmaamay mid argagixiso oo la doonayo in qalqal lagu galiyo amniga dalkiisa, wuxuuna wacad ku maray in uu hor istaagi doono qorshe kasta oo lagu tabobarayo ciidammadaas.